China FOTON H7 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
N'ihi mgbanwe dị elu nke nhazi na ikike dị iche iche, enwere ike ịhazi ya maka njem na-eme njem na njem ụgbọ njem. A na-ahazi ihe ndị ahụ, ike ọrụ, nhazi na mmepụta maka ịhazi ogologo ndụ.
N'ozuzu Dimension 7300 * 2230 * 3030 (na A / C)
Oche ụkwụ 4000
Curb arọ 6T
Ikike Oche 21 + 1/23 + 1/25 + 1/26 + 1....
Ọhụrụ Foton H7 na-ejikọta arụmọrụ dị elu na nkasi obi, na ogo dị mma yana nchekwa dị oke mma. E tinyekwuru ike ọ bụghị naanị na atụmatụ ikuku ya na njirimara ọkwọ ụgbọ ala pụtara ìhè, kamakwa ọkachasị na mmanụ ọkụ ya na-akwụ ụgwọ na obere ụgwọ ndụ.
Site na usoro ike dị elu na ike R&D tozuru oke, Foton 7M usoro ụgbọ ala nwere usoro ihe eji egwu egwu, na-egosipụta arụmọrụ moto na obere oriri.
Omume mmalite arụmọrụ, karịsịa na ultralow okpomọkụ, -40ºC;
Obere ụda, obere mkpọtụ maka ịnya ụgbọ ala ka mma, 7% dị ala karịa ngwaahịa ndị ọzọ na-asọmpi;
Ibu ibu ruru 340kg, 15% -60% dị mfe karịa ngwaahịa ndị ọzọ na-asọ mpi;
Mmepụta kwa lita na-abịaru 33.2kW / L, 10-35% dị elu karịa ngwaahịa ndị ọzọ na-asọ mpi;
Oke torque ruru 600NM, emechara nke ọma na mkpọda-ịrị.
Ndụ mmanụ jupụta
Lọ axle nwere nhazi pụrụ iche, ezigbo nkwụsi ike na ike dị elu;
Ikpeazụ mbelata mbanye na kọmpat Ọdịdị, elu-ike gia na a ka mma lubrication conditio;
Obere mkpọtụ na nrụpụta mbufe dị elu, na-eme ka nkasi obi na akụ na ụba ụgbọ ala.
Dabere na usoro chassis chassis Foton tozuru etozu, Foton ụgbọ ala emeela nchacha chassis maka ịhazi usoro bọs zuru oke:
Tụkwasị obi jiri 30% gbasaa chassis etiti, ọtụtụ ihe nchekwa nchekwa na-akwalite Nnukwu nnabata na ahịa ụwa.
Front diski breeki & N'azụ drum breeki
Heatrụ ọrụ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka nkwụsi ike na arụmọrụ braking nke usoro braking dị mfe Ọdịdị dị mfe na nlọghachi dị mma na mgbake
Usoro ịdọ aka na ntị ọpụpụ (LDWS) sistemụ nke na-adọ onye na-akwọ ụgbọ ala aka na ntị mgbe ụgbọala malitere ọpụpụ n'amaghị ama